Ogaden News Agency (ONA) – Xabsiga Ma’ekelawi oo Maxaabiis Badan Aad Loogu Dhibaateeyay.
Xabsiga Ma’ekelawi oo Maxaabiis Badan Aad Loogu Dhibaateeyay.
Posted by Dulmane	/ November 14, 2017
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta Gumaysiga Itoobiya ayaa aad uga dayrinaya xaalada maxaabiista kuxidhan xabsiga wayn ee Ma’ekelawi, halkaas oo lasheegay in ay boqolaal maxaabiis ah kuxidhan yihiin.
Sida xogta aan kuhelayno ciidamada wayaanaha ayaa si bini’aadam nimada kabaxsan ula dhama maxaabiista Jeelka Ma’ekelawi, waxaana lasoo tabinayaa in ay maxaabiistu mutaan tacadiyo kala duwan oo isugu jira dil, jidh-dil iyo kufsi baahsan oo loogaysto dumarka kuxidhan jeelka.
Hay’adaha xuquuqul insaanka ayaa ayaa dhowr jeer kahadlay xaalada bini’aadam nimo ee kajirta jeelka Ma’ekelawi iyo guud ahaan xabsiyada ay xukuumada wayaanuhu iqaabta iyo dulaynta dadwaynaha usamaysatay.
Hay’adaha xuquuqul insaanka ayaa intaas kudaray in ay dhibaatada maxaabiista lagu hayo ma’uul kayihiin nin Genaral ah iyo nin Kornayl ah oo labaduba udhashay qoomiyada gumaadka shacabka u istaagtay ee Tigreega.
Xabsiga wayn ee Ma’ekelawi ayaa kamid ah xabsiyada dadka lagu iqaabo waxayna xukuumada wayaanuhu gaysaa xabsiga Ma’ekelawi dadka siyaasada loohaysto ama xukuumada wayaanaha kasoo horjeeda, waxaana hada xabsiga kuxidhan dhowr boqol oo shacab iyo siyaasiyiin isugu jira.
Xukuumada Gumaysiga Itoobiya ayaa caan ku ah iqaabta iyo gabood falada ay ugaysanayso dadka uxidh xidhan waxayna xukuumada wayaanuhu qaar kamid ah dadka uxidh xidhan u adeegsataa sun iyo waxyaabo kale oo dadka gumaada.
Xabsiga Wayn ee kuyaala magaalada Jigjiga ee loo yaqaano Jeel-ogaadeen ayaa kamid ah meelaha ugu daran ee dadka maxaabiista ah lagu dhibaateeyo, waxaana sanadihii lasoo dhaafay Jeel-ogaadeen kadhacay tacadiyo uu kufsigu ugu daran yahay oo loogaysto kumanaan shacab ah oo aan waxba galabsanin.